4 qof oo laga helay covid 19 D.D.somalida itoobiya, 9 xaaladood oo laga helay itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 4 qof oo laga helay covid 19 D.D.somalida itoobiya, 9 xaaladood oo...
4 qof oo laga helay covid 19 D.D.somalida itoobiya, 9 xaaladood oo laga helay itoobiya
warbixintii ugu danbeysay xanuunka COVID19 Ethiopia maanta oo laga helay Sagaal (9) qof oo dheeraad ayaa laga helay markiii la baadhey noqdey +ve baadhitaankaas oo la sameeyey 24kii saacadood ee ugu danbeyeyfor iyadoo baadhitaan lagu sameeyey in ka badan 3,580 tijaabooyinka shaybaarka, waana baadhitaanka ugu sarreysey maalin tan iyo markii ay Itoobiya bilowdey baaritaanka.
Tani waxay keenaysaa kiisaska la xaqiijiyay tirada guud ee itoobiya oo dhan 272.
Wadarta tirada soo kabashada ayaa weli ah 108; & sidoo kale ma jiraan wax bukaan oo xaalada degdega ku jira oo loo yaqaano #ICU majiro.
Laba ka mid ah sagaalka (9) bukaannada cusub ayaan taariikh safar ku lahayn dibadda ama ma lahan raad raac xiriir ah illaa iyo hadda; 4 leedahay taariikh safar safar dibada; iyo 3da hartay ayaa leh raad raac. Dhamaan sagaalka waa Itoobiyaan: shan rag ah iyo afar haween ah. Shan ka mid ah waxay ka yimaadeen #AddisAbeba halka afarta hartayna waxay ka yimaadeen xarunta #Jigjiga ee karantiiga gobolka #Somali.
Ethiopia ilaa iyo hadda waxay sameysay 45, 278 tijaabooyin shaybaar oo loogu talagalay # COVID19, maanta waa kii ugu sarreeyay 24 saac ee lasoo dhaafey
Tirada guud ee qabta itoobiya oo dhan waa 272qof
Tirada guud ee ka bogsatey xanuunka covid19 108 qof
Tirada guud ee u dhimatey xanuunkan itoobiya wll 5 qof